China Bandage mask masinina Mpanamboatra sy mpanamboatra | Sanying
Mpanamboatra masinina saron-tava
Masinina sarontava vita amin'ny bandy dia fitaovana mamatotra mamatotra ho an'ny saron-tava fiaramanidina. Ampiasaina indrindra amin'ny famatahana lasitra maska ​​fiaramanidina tsy tenona. Izy io dia afaka manamboatra fehikibo karazana saron-tava fiaramanidina. Izy io dia azo ampiharina indrindra amin'ny famatahana mamatotra mason-damba tsy misy tenona 2 sosona, saron-tava fiaramanidina tsy misy tenona 3 sosona, saron-tava fiaramanidina medika, saron-tava fiaramanidina karbaona miampy 4-layer ary saron-tava fiaramanidina anti-virus.
Ny rohy tsirairay amin'ireo fitaovana dia manana fitaovana fitiliana inductive. Raha misy ny lesoka amin'ny fizotran'ny fandidiana dia ho hitan'ny sensor avy hatrany ny fanairana ary hampiato ny masinina. Mandritra izany fotoana izany dia hiseho ny rohin'ny lesoka eo amin'ny efijery fampisehoana fanaraha-maso fitaovana, izay manatsara be ny fahombiazan'ny famokarana.
Ny masinina saron-tava bandage dia mandray ny fomba fantsom-pandrefesana ultrasonic, ary fitaovana fampitaovana no napetraka eo amin'ny lampihazo. Ireo vokatra saron-tava semi-vita dia ampidirina avy amin'ny fitaovana fampitaovana, ary avy eo tapaka ny fehy rehefa avy noteren'ny kodiarana voninkazo ultrasonika, mba hamoahana ireo vokatra vita. Olona iray ihany no takiana hametraka ny saron-tava semi-vita amin'ny fehikibo conveyor an'ny milina, ary ny sisa amin'ny asa fanarahana dia vita ho azy.
Famatsiana herinaratra miasa 220 V
Herin'ny fitaovana 3000W
Fahombiazan'ny asa Takelaka 25-30 / min
Ny haben'ny masinina 1920 (L) x 900 (W) x 1200 (H) mm
Milanja lanja 300kg
1.The frame dia vita amin'ny alimo aliminioma sy vy tsy misy fangarony, izay maivana sy tsara tarehy tsy misy harafesina.
2. Ny fanisana mandeha ho azy dia afaka mifehy tsara ny fahombiazan'ny famokarana sy ny fandrosoana.
3. Fanaraha-maso fanovana matetika, izay afaka manitsy ny hafainganam-pandehan'ny fitaovana mifanaraka amin'ny tena filàna.
4. Fahanana barika hisintona, fametrahana marina kokoa, dia afaka mifehy ny sakan'ny akora hatramin'ny farafaharatsiny ary mamonjy ny vidiny.
5. Ny halavany sy ny haben'ny vokatra vita dia tokony fehezina mitovy, miaraka amin'ny fiviliana ± 1 mm, izay afaka mifehy tsara ny halavan'ny vokatra vita.
6. Tena mandeha ho azy ny fitaovana ary mitaky takiana ambany ho an'ny mpandraharaha, noho izany dia ilaina ny mamoaka fitaovana sy mandamina ireo vokatra vita.
7. Fampisehoana marin-toerana sy fiasa mety.
8. Ny kodiarana fantsom-pandrefesana mandeha ho azy dia vita amin'ny vy avo lenta, miaraka amin'ny fiainana maharitra sy ny fanoherana.
Previous: Ny mpamorona karatra famantarana ny hamandoana dia namboarina ho fiarovana ny tontolo iainana karatra hamandoana 6 isa
Manaraka: Karazan-kaopy, masinina karazana masira semi-automatique masinina, masinina sarimihetsika semi-mandeha ho azy
Masinina saron-tava iray Drag Drag
Masinina saron-tava iray Drag Drag, Lamba matevina manohitra ny statika, Kitapo bubble fonosana, Lamba mena, Mpanamboatra sarontava, Masinina saron-tarehy,